Ra?iisul-wasaare Saacid oo xafiiskiisa ku qaabilay ururada bulshada rayidka ah ee Moqdisho. – Radio Daljir
Ra?iisul-wasaare Saacid oo xafiiskiisa ku qaabilay ururada bulshada rayidka ah ee Moqdisho.
Oktoobar 22, 2012 9:22 b 0
Moqdisho, Oct, 22 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay haween ka kala socday qeybaha bulshada Rayidka, wuxuuna Ra?iisul wasaaruhu la tashi ballaaran kala sameeyay qaabka loo wajahayo marxaladda cusub ee dalku galay.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa kulankaan si daah furnaan ah su?aalo u weydiiyeen haweenkii shirka ka soo qeybgalay waxayna haweenku soo dhaweeyey Ra?iisul wasaaraha iyagoona u muujiyey inay la yeelan doonaan wada shaqayn joogta ah si laysku waydaarsado talooyinka wax ku ool ah, iygoona soo jeediyey in la badiyo kulamada noocaan ah si looga faa?iideysto maskaxda haweenka iyo dhamaan qeybaha bulshada rayidka ah.
?Haweenka Soomaaliyeed waxay sugayeen mudo badan inay helaan dowlad Soomaaliyeed oo Rasmi ah, dhibaatooyinkii ka dhacay dalka intooda ugu badan waxay soo gaareen haweenka iyo dhalinyarada waxaana markasta u taaganahay inaan safka hore ka galno sidii qaranimadii Soomaaliya dib loogu abuuri lahaa waxaana xog ogaal u nahay duruufaha ka dhex jira bulshada. haweenka Soomaaliyeed waxay xaga aqoonta uga jiraan kaalimaha ugu horeeya waana muhiim in xukuumada la dhisayo aan ku yeelano kaalin wax mug leh sababtoo ah Qaran waxaa lagu dhisi karaa marka haweenku qaataan doorkooda loona ogolaado xuquuqahooda asaasiga ah, waxaan maanta balan qaadaynaa inaan wada shaqayn joogta ah la yeelano dowlada anagoo magacaabi doona gudi arintaas ka shaqeeya?
Ugu dambeyntii Ra?iisul Wasaare Dr. Saacid waxa uu u balan qaaday in haweenka Soomaaliyeed iyo Bulshada Rayidka ah xafiiskiisu uu u furan yahay xilli kasta uuna sii wadi doono kulamada noocaan ah kuwaasoo talada lagu weydiinayo qeybaha shacabka Soomaaliyeed sida bulshada Rayidka, haweenka, odayaasha dhaqanka, Culimada iyo Aqoonyahanka ku sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxaadna maanta nasiib u yeelateen in kulankii ugu horeeyey oo ka dhaca xafiiskayga aad idinku ugu horaysaan taasna ay muujinayso tixgalinta aan u hayo Haweenka.
Wafdi uu hogaaminayay Wasiirka Caafimaadka PL oo maanta kormeeray xaafadaha ay wali biyaha roobka dhex fadhiyaan.